dimanche, 27 septembre 2020 18:58
Kitra – Barea: Naratra nandritra ny fanazarantena i Anicet Abel, kapiteny
Tsy ho afaka handray anjara amin’ny lalao ara-pirahalahiana hihaonan’ny Barea sy Luxembourg, i Anicet Abel, kapitenin’ny Barea. Naratra nandritra ny fanazaran-tena nataony tao amin'ny klioba izay ilalaovany ity farany. Maharitra eo amin'ny telo herinandro eo ho eo ny fitsaharana tsy ahafahany miakatra eny ambony kianja. Tsy ho eo i Anicet Abel amin'ny fampivondronana izay hatao ao Frantsa amin'ny voalohandohan'ny volana oktobra io. Ho tafaraka amin'i Barea kosa izy amin'ny fihaonana amin'ny Côte d'Ivoire. Noho ny fahatahorana an'ilay Covid-19 no voalaza fa nahatonga ny safidy hanatanterahana ilay fampivondronana any Luxembourg. Sady mahay mandray olona ihany koa, no mampihena ny vola mivoaka avy amin'ny fanjakana Malagasy. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 21 septembre 2020 21:43
Kitra – Barea: Tsy ho any Portugal, fa mety ho any Maroc
Tsy afaka hotanterahina ny lalao ara-pirahalahiana hihaonan’ny Barea amin’ny Etalons Burkina Faso nokasaina hatao any Portugal ny sabotsy 10 oktobra 2020 noho ny firongatry ny valanaretina Covid-19 any amin’ity firenena ity. Lalao fanomanantena izy ity, mialoha ny fifanandrinana in-droa miantoana amin'ny Elefanta Côte d'Ivoire, amin'ny volana novambra 2020, izay tafiditra ao anatin'ny fifanintsanana ny CAN 2021. Ho fantatra amin’ny herinandro ho avy, ny toerana hanaovana io lalao ara-pirahalahiana hifampitsapana amin’i Burkina-Faso io. Misy ny fifampiraharahana amin’ny federasiona any Maroc ny amin’izany. Efa nisy koa anefa ny safidy voalohany ny hiatrehan’ny Barea lalao fanomanantena amina klioba iray any Luxembourg.Hisy ny fampivondronana ireo mpilalao handrafitra ny Barea, hanomboka amin’ny 5 oktobra any Frantsa.
samedi, 19 septembre 2020 20:27
Spaoro mekanika: Nodimandry i Ratsifandrihamanana Nirina
Nindaosin’ny fahafatesana androany 19 septambra 2020 teo amin’ny faha-62 taonany i Ratsifandrihamanana Nirina. Injeniera mekanika i Nirina, ary diso fantatra teo amin’ny spaoro mekanika, indrindra ny hazakaza-piarakodia. Ratsifandrihamanana Nirina no zokiolona indrindra nandray anjara tamin’ny fifaninanam-pirenena ny taom-pilalaovana 2019 lasa iny. Fiara Peugeot hatrany no nampiasainy. Niandoha tamin’ny 104 ZS, nandraisany anjara tamin’ny « course de cote » Ankatso ny taona 1992. « Baomba kely » no niantsoany io fiarany io, ary zary anaram-bositra niantsoana an’i Nirina ihany koa. Nirotsaka nanao hazakaza-piarakodia i « Baomba kely » ny taona 1994, ary nitohy hatramin’ny taom-pilalaovana farany teo izany, nahazoany anaram-boninahitra maro. Tao amin’ny klioba FMMSAM (Firaisana Malagasy Mpanao Sport Automobile sy Moto) hatrany izy. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 16 septembre 2020 22:05
Lalao fanomanantena: Hifandona ny Barea sy Burkina Faso
Hanatanteraka lalao ara-pirahalahiana ny Barea sy ny Burkina Faso ny 5 hatramin'ny 13 oktobra ho avy izao. Lalao izay hatao any Portugal, tafiditra anatin'ny fampivondronana sy fanomanantena mialoha ny hiatrehantsika ny tohin'ny fifaninanana handraisana anjara amin'ny CAN izao lalao zao. Ireo mpilalao nantsoina handrafitra ny Barea amin'izany :
dimanche, 13 septembre 2020 12:12
Kitra - Barea: Hiatrika lalao ara-pirahalahiana any ivelany
Hiatrika lalao ara-pirahalahiana any ivelany ny Barea an’i Madagasikara ho fanomanan-tena mialoha ny lalao mandroso sy miverina hifanandrinany amin'ny Côte d’Ivoire. Lalao fifanintsanana CAN 2021, tokony ho natao tamin’ny volana martsa 2020 ity fihaonan’ny Barea sy Côte d’Ivoire, saingy nahemotra noho ny valanaretina coronavirus. Hatao eo anelanelan’ny 9-17 novambra 2020 ny lalao, ka any Côte d’ivoire ny lalao mandroso.Mety hatao ao amin’ny kianja Barikadimy Toamasina ny lalao miverina eto Madagasikara.
mardi, 25 août 2020 16:20
Ronaldinho: Nivoaka ny fonja nitazomana azy tany Paraguay
Pasipaoro hosoka sy tsy fanefana ny hetra no nitazomana am-ponja an’i Ronaldinho sy ny raharalahiny tany Paraguay, nanomboka ny 6 martsa 2020. Nalefa nivantana tamin’ny fahitalavitra ny fitsarana azy ny 24 aogositra. Naharitra adim-pamantaranandro telo izany.Afaka izy, saingy mandoa honitra 90 000 dolara. Teratany breziliana, ary mpilalao baolina kitra malaza i Ronaldinho. Izy no voahosotra hahazo ny baolina volamena na « Ballon d’or » ny taona 2005. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 23 août 2020 19:44
Paris-SG 0 - 1 Bayern Kingsley Coman 59'
dimanche, 23 août 2020 16:56
Kitra-LDC: Anio ny famaranana PSG # Bayern
Hotanterahina anio alina ny lalao famaranana iadiana ny tompondakan’i Eorôpa eo amin’ny ekipa tompondaka, hifanandrinan’ny klioba frantsay Paris Saint Germain amin’ny klioba alemana Bayern Munich. Sambany ho an’ny PSG no hiatrika famaranana ny « Ligue des champions » eoropeana, raha toa ka efa nandrombaka in-dimy nibata io amboara io Bayern Munich. Samy teratany alemana ny mpanazatra ireto ekipa roa tonta hiatrika famaranana ireo, dia i Thomas Tuchel ho an’ny PSG ary i Hans-Dieter Flick ho an’ny Bayern. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 18 août 2020 13:03
Kitra-Tompondakan’i Eorôpa: Anio ny manasadalana voalohany
Hifandona mandritra ny lalao manasadalana voalohany, anio alina, amin’ny fiadiana ny Tompondakan’i Eorôpa ny klioba RasenBallsport Leipzig sy Paris Saint-Germain Football Club. Samy teratany alemana i Julian Nagelsmann sy Thomas Tuchel mpanazatra an’ireto klioba roa ireto. Mpilalao teo ambany saokan’i Thomas Tuchel i Julian Nagelsmann, ary mbola i Thomas Tuchel no nahatonga an’i Julian Nagelsmann ho mpanazatra. Ankoatra ireo klioba hiady ny tapakila famaranana dia hifampitana koa ny mpianatra sy ny mpampianatra anio.
dimanche, 16 août 2020 22:16
Kitra- Ligue des champions UEFA: Raharahan’ny Alemana sy Frantsay ny manasadalana
Ekipa alemana roa, miampy ekipa frantsay roa no tonga eo amin’ny dingan’ny manasadalana amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Eorôpa amin’ny baolina kitra, dia i RB Leipzig sy Bayern Munich ho an-dry zareo Alemana, ary PSG sy Lyon ho an’ny Frantsay. Mpanazatra teratany alemana telo sy frantsay iray no mitarika ireto klioba ireo. Raharahan’ny Alemana sy Frantsay ny manasadalana izay hatao ny talata sy alarobia ho avy izao, any Lisbonne Portugal. Ka PSG hifandona amin’ny RB Leipzig, ary Bayern Munich hifanandrina amin’ny Lyon.